Robert Mugabe Archives - The South Africa - SA News and info
Motshekga fails in her obligation to improve chronically underperforming schools – DA
Zimbabwe’s unemployed graduates plan demonstration
As the wave of protests continues in Zimbabwe, a group of unemployed graduates calling themselves the Zimbabwe Coalition for Unemployed Graduates are planning a demonstration on August 5 to express their displeasure at the current rate of unemployment in the country. Leader of the group, Rodwell Tendai Nyika, said the …
Arrest Mugabe and Chinamasa says Biti
If there was anyone to be arrested for inciting public violence in Zimbabwe, then it should be President Robert Mugabe and Finance Minister Patrick Chinamasa, and not activists who were being persecuted by the government, opposition PDP leader Tendai Biti said Tuesday. Biti was responding to the arrest on allegations …
Gays are worse than pigs and dogs, Mugabe
As many as five Zimbabweans in the much-maligned Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender and Intersex community commit suicide every year because of homophobia, a Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) official said. Speaking at a media training workshop in Harare on Thursday, GALZ Programmes Officer, Sylvester Nyamatendedza, said there was …
Comply with indigenisation or ship out: Mugabe
Zimbabwe’s President Mugabe said his government will no longer accept companies who refuse to comply with the law. (REUTERS) Foreign companies who have failed to comply with Zimbabwe’s indigenisation laws will be required to do so in 2016. President Robert Mugabe was closing the annual Zanu PF party conference in …
A foreign investor has snapped up a 27% stake in Zimbabwe’s second largest dairy company Dendairy for US$6m, in a development seen by experts as likely to help shore up capacity and capitalisation for the local producer. MN Capital Africa Advisors brokered the deal, which saw Scandinavian-based private equity investment …
Durban, Featured, Joburg
Zimbabwean President Robert Mugabe, who also chairs the Southern African Development Community and the African union, has come under fire over his silence, as xenophobic attacks targeting foreign nationals spread from Durban to Johannesburg. According to News Day, anxiety and anger gripped Zimbabwe, with opposition politicians and social commentators criticising …